Bit By Bit - dhaqanka loo kuurgalo - 2.3.9
Ilo xog Big la raran karo junk iyo spam.
Qaar ka mid ah cilmi baarayaashu waxay aaminsan yihiin in ilaha xogta ee muhiimka ah, gaar ahaan ilaha internetka, ay yihiin kuwo caqli-gal ah, sababtoo ah si toos ah ayaa loo ururiyaa Xaqiiqdii, dadka la shaqeeyay ilaha xogta waaweyn waxay og yihiin in ay had iyo jeer yihiin wasakh . Taasi waa, waxay inta badan ku jiraan macluumaadka aan ka tarjumeynin falalka dhabta ah ee danaha cilmi-baarayaasha. Inta badan saynisyahanno bulshadu waxay mar horeba yaqaanaan habka loo nadiifiyo xogta xog ururin bulsheed oo ballaadhan, laakiin nadiifinta ilaha xogta waaweyn ayaa u muuqda mid adag. Waxaan u maleynayaa in halka ugu dambeeya ee dhibaatadani ay tahay in qaar badan oo ka mid ah ilahan xogta weyn aan waligeed loola jeedin in loo adeegsado cilmi-baaris, sidaas darteedna lama ururin, lagu keydiyo, loona diiwaangeliyo qaab u sahlaya nadiifinta xogta.
Khatarta xogta saxda ah ee raadinta saxda ah ee dijitaalka ah waxaa lagu muujiyey Dib-u-celinta iyo saaxiibada (2010) daraasad ku saabsan jawaab-celinta dareenka ee weerarrada Sebtembar 11, 2001, oo aan si kooban u soo sheegnay cutubka. Cilmi-baadhayaashu waxay caadi ahaan baraan jawaabta dhacdooyinka naxdinta leh iyagoo isticmaalaya xogta dib-u-celinta ee la ururiyey bilihii ama xitaa sanado. Hase yeeshee, Back iyo saaxiibada waxay heleen il-joogta markasta oo ah raadinta dhijitaalka ah - waqtigoodii oo dhan, fariimo toos ah oo la duubay oo laga helay 85,000 oo ah buugaagta American- waxayna taasi u suurta gelisay in ay ka jawaabaan jawaabaha dareenka ah ee ku saabsan waqti badan. Waxay abuureen mudo hal-daqiiqo ah oo caadifadeed oo ah 11-kii Sebtembar iyaga oo codsanaya nuxurka dareenka ee farriimaha faraha ah by boqolkiiba erayada la xidhiidha (1) murugo (tus., "Oohin" iyo "murugo"), (2) walaac ( sida, "welwel" iyo "cabsi"), iyo (3) xanaaq (sida "nacayb" iyo "muhiim"). Waxay ogaadeen in murugo iyo walaacu ay maalin kasta u muuqdaan kuwo aan lahayn qaab xoog leh, laakiin waxaa jiray kor u kac ku yimid xanaaq maalintii oo dhan. Daraasadani waxay u muuqataa inay tahay tusaale cajiib ah oo ku saabsan awooda ilaha xogta had iyo jeer: haddii ilaha xogta dhaqameed la isticmaalay, waxaa suurta gal ah in la helo waqtigaa xaddidan oo xaddidan oo ah jawaab celinta degdegga ah ee dhacdo lama filaan ah.
Hal sano ka dib, si kastaba ha ahaatee, Cynthia Pury (2011) waxay si taxadar leh u eegtay xogta. Waxay ogaatay in tiro badan oo ka mid ah fariimaha cadhaysan ee loo soociyey ay ka soo baxeen hal jeexasho waxayna dhammaantood isku mid ahaayeen. Waa kuwan kuwa fariin careysan u sheegay:
"Mashiinka reboot NT [name] ee golaha wasiirada [name] at [meesha]: DARAN: [taariikhda iyo waqtiga]"
Fariimahaan waxaa lagu calaamadiyay cadho sababtoo ah waxay ku darayaan ereyga "CRITICAL," oo guud ahaan muujin kara xanaaq laakiin kiiskani ma aha. Ka-saarida farriimaha soo baxay ee is-xigxigaan oo keliya ayaa si buuxda u ciribtiri doona kororka cad ee xanaaqa maalinta koowaad (jaantus 2.4). Si kale haddii loo dhigo, natiijada ugu weyn ee Back, Küfner, and Egloff (2010) ahayd mid ka mid ah hal abuur. Sida tusaalahan tilmaamaysa, falanqaynta sahlan ee xogta adag oo aan fiicnayn ayaa suurtogal ah in ay si xun u khaldanto.
Jaantus 2.4: Isku-dheelitiridda is-daba-joogga ah ee ka dhacay muddadii Sebtembar 11, 2001 oo ku salaysan 85,000 oo ah khabiiro American ah (Back, Küfner, and Egloff 2010, 2011; Pury 2011) . Asal ahaan, Back, Küfner, and Egloff (2010) soo sheegeen habka xanaaqa sii kordhaya maalin kasta. Si kastaba ha ahaatee, farriimaha aadka u xanaaqsan ee intooda badani waxa soo saaray hal jeexasho oo si joogta ah u soo direy fariin soo socota: "Dib u furida mashiinka NT [name] ee golaha wasiirada [magac]: GOOYADA: [taariikh iyo waqti]. Farriintaani way ka baxday, kororka muuqda ee xanaaqa waa la baabi'i doonaa (Pury 2011; Back, Küfner, and Egloff 2011) . Laga soo bilaabo Pury (2011) , sawirka 1b.
Inkastoo xogta wasakhaysan ee la abuuro si aan ula kac ahayn - sida mid ka mid ah hal buuq ah - waxaa lagu ogaan karaa cilmi-baaris macquul ah, waxaa sidoo kale jira nidaamyo internetka ah oo soo jiidanaya is-casilaad aan caadi ahayn. Waraaqahaasi waxay si firfircoon u soo saaraan xog been abuur ah, oo badanaa ku dhiirigeliyay shaqa faa'iido leh in ay sii wadaan xajinta is-qarxinta. Tusaale ahaan, waxqabadka siyaasadeed ee Twitter wuxuu u muuqdaa inuu ku jiro ugu yaraan suurtagalnimada qaar ka mid ah spam, taas oo sababaha siyaasadeed ee si ula kac ah loo sameeyey si loo eego caan ka badan inta ay dhab ahaantii yihiin (Ratkiewicz et al. 2011) . Nasiib daro, ka saara this tufaaxa ula kac ah waa mid aad u adag.
Dabcan waxa loo tixgeliyaa xogta wasakhaysan waxay ku xiran tahay, qayb ahaan, su'aasha cilmi-baarista. Tusaale ahaan, edebo badan oo ku saabsan Wikipedia waxaa abuuray gawaarida automated (Geiger 2014) . Haddii aad xiiseyneyso cilmiga noolaha ee Wikipedia, ka dibna qaababka bikrimka ah ayaa aasaas u ah. Laakiin haddii aad xiiseyneyso sida bini-aadanku uga qaybqaato Wikipedia, ka dibna waa in laga saaro edyada bot-abuurka.
Ma jiro hal farsamo ama qaab habboon oo hubin kara inaad si ku filan u nadiifisay xogtaaga wasakhda ah. Ugu dambeyntii, waxaan u maleynayaa habka ugu wanaagsan ee looga hortagi karo in lagu nacasoobo xogta wasakhaysan waa in la fahmo sida ugu macquulsan ee ku saabsan sida xogtaada loo abuuray.